Sweden waa wadanka sadexaad ee ugu nolosha fiican caalamka | Somaliska
Iswiidhen waa dalka saddexaad ee waddammada caalamka ee ugu wanaagsan in lagu noolaado, sida ku cad wargeeyska Newsweek oo middaa soo daabacay.
Liiska wargeeyska ayuu kaalinta koowaad kaga jiraa dalka deriska ah ee Finland iyo kaalinta labaad oo uu galay dalka Iswiitserland. Wargeeyska ayaa waddammada ku qiimeeyay shan qodob oo qeexaya hab-wanaagga nolosha ee dal: Caafimaadka,
Tayada-nolosha, dhaqaalaha iyo hab-tartankiisa iyo ugu dambeeyn xaaladda siyaasadda ee dal ku sugan yahay.
Marka la eego shantaa qodob wuxuu dalka Iswiidhen ka galay halka ugu sarreeysa marka laga hadlayo xaaladda siyaasadda ee dalku ku sugan yahay, iyadoona uu marxaladda ugu hooseeysa ka galay dhanka tacliinta. Haddii la eego waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ayuu dalka Iswiidhen galayaa kaalinta labaad ee waddanka ugu wanaagsan ee lagu noolaado waddammada caalamka, maadaama aannu dalka Iswiitserland xubin ka ahyn ururka EU-da.
Wargeeyska ayaa sidoo kale xaqiijiyay in waddammada yar yar ey kaalin wanaagsan ka soo baxeen kolka loo bar-bar dhigo waddammada waaweeyn, maadaama aanay sida waddammada yar yar u sahlaneeyn in xaaladda nolosha ee dalka oo dhan kor loo wada qaado.
”In lagu noolaado waddan yar ee qaniya waa mid aad u wanaagsan, waxaa middaa tusaale u noqoneeysa haddii la eego waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo horumarka aan kala go’a laheeyn ee ey sida joogtada ah ugu tallaabsadaan”, sida uu qoray wargeeyska Newsweek.
Waddammada liiska dhanka hoose kaga jira waxaa ka mid ah waddammo badan ee dhaca qaaradda Afrika. Iyadoona dalka Burkiino Faaso uu kaalinta ugu dambeeysa ka galay.
Guud ahaan waxaa wargeeyska Newsweek liiskiisa ku magacaaban 100 waddan.
Liiska waddammada ugu wanaagsan.
Xigasho: Sveriges Radio